Daaweynta Proton ee Kansarka Naasaha - CA Proton Daaweynta Burooyinka
Bogga ugu weyn / Kansarka naasaha
Sababaha & Khataraha
Marxaladaha & Darajooyinka
Daaweynta Kansarka Naasaha ee Proton
La dagaallama kansarka naasaha Laabis-Sida oo kale ah
Farsamaynta iskaanka teknoolojiyadda tijaabada ah ee loo yaqaan 'Jaamcaanka Kalluunka ee loo yaqaan' Jaamcaanka Kalluunka ee California 'ee xoogga culus ee qaab-dhismeedka shucaaca waa qaab aad u sax ah oo lagu daweeyo shucaaca kansarka kaasoo u saamaxaya dhakhaatiirteenna inay si weyn u bartilmaameedsadaan burooyinka naasaha ee leh cabbir aad u sareeya aaggaas murugsan.
Marka la barbar dhigo daaweynta proton-ka firfircoon ee daaweynta proton ee kansarka naasaha, teknoolojiyada baarista qalin-kayga ayaa si sax ah u siisa daaweynta shucaaca proton ee kansarka naasaha gudaheeda 2 milimitir iyo daryeelka ugu weyn. Waxaan ku weeraraynaa lakabka burooyinka lakab waxaanna yareynaynaa ugaarsiga waxyeelada unugyada caafimaadka qaba iyo xubnaha jirka. Tani waxay muhiim u tahay bukaannada kansarka naasaha oo laga yaabo inay la kulmaan halista kansarka sare, dhaawacyada sambabaha iyo dhacdooyinka wadnaha ee ugu dambeeya nolosha dambe ka dib soo-gaadhista hore ee shucaaca. Yaraynta sunta shucaaca la xiriirta waxay sidoo kale kordhineysaa suuragalnimada in bukaanku ku dhammaystiri karaan daaweyn kala go ’yar ama dib u dhac ah.
Daaweynta Kansarka Naasaha Proton
Kansarka naasaha marxaladaha hore
Kansarka naasaha ee maxalliga ah (Marxaladda II iyo III)
Kansarka naasaha ee saddex-geesoodka ah
Kansarka naasaha oo soo noqnoqda
Ka ilaali qalbigaaga, sambabbada iyo xadhigga laf-dhabarta
Joogto tayada noloshaada inta lagu jiro daaweynta kansarka naasaha
Yaree dhibaatooyinka soo raaca ee daaweynta shucaaca, oo ay ku jiraan halista dhacdooyinka wadnaha, kansarka sambabka iyo oof wareenka
Baadhitaan ku saabsan qorshooyinka daaweynta dumarka qaba kansarka naasaha bidix ee gacanta ku haya daaweynta naas-nuujinta ayaa lagu ogaaday in marka loo eego shucaaca raajada, daaweynta proton ay keentay:
Qiyaasta shucaaca sanbabada1
Shucaac yareeyay naaska kale1
Yaraynta qaddarka shucaaca ee wadnaha1
Faa'iidooyinka Daaweynta Proton ee Kansarka Naasaha
Xaruntadeena daaweynta kansarka naasaha tiknoolajiyada qalin baarista ayaa si sax ah u xakameysa borotoonada si loo dhigo meesha ugu sareysa ee Bragg - barta ay dhigayaan tamartooda ugu badan — si toos ah buro. Tani waxay noo oggolaaneysaa inaan daaweyno qaababka burooyinka ee aadka u adag oo aan ku kala duwanaanno qiyaasta burooyinka gudahooda.
Daaweynta proton-ka ee horumarsan waxay u oggolaaneysaa dhakhaatiirta inay si aad ah u doortaan shucaac heer sare ah kansarka naasaha iyo unugyada, iyo in la yareeyo qiyaasta unugyada caafimaadka qaba iyo xubnaha muhiimka ah ee ku xeeran. Xaaladaha qaarkood, tan waxaa loo muujiyey inay gaarsiiso heerar ka sarreeya daawaynta shucaaca xitaa marka lagu jiro xaaladaha ugu adag.
Daraasado la sameeyay ayaa lagu ogaaday in daaweynta proton ee kansarka naasaha ay si fiican u daboosho unugyada qanjirada, iyada oo si weyn hoos loogu dhigo qiyaasta celcelis ahaan shucaaca wadnaha iyo sambabbada. Tani waxay ugu dambeyntii keenaysaa in la yareeyo halista dhacdooyinka wadnaha, kansarka sambabka iyo oof wareenka.
Neefsashada qayb ahaan naaska (PBI) oo leh daaweynta proton waxay bixisaa xitaa qaybinta shucaaca waxayna yareysaa soo-gaadhista unugyada naaska ee caafimaadka qaba, wadnaha iyo sambabbada marka la barbar dhigo farsamooyinka sawir-qaadista iyo raajada PBI. Waxay sidoo kale la xiriirtay sumoobo yaraaday iyo natiijooyin badan oo wanaagsan.
Marxaladaha Kansarka Naasaha
& Daaweynta Proton
Iyada oo ku xidhan marxaladda kansarka naasaha, daaweyn isku dhafan oo ah mastektomi ama qalliin lumpectomy, kemotherapy iyo shucaac ayaa laga yaabaa in loogu baahdo qaar ka mid ah burooyinka naasaha. Fursadaha daaweynta ayaa sidoo kale saameyn ku leh nooca kansarka naasaha, da'da, caafimaadka guud iyo doorbidyada shaqsiyadeed.
Marxaladda I kansarka naasaha aad ayuu u yar yahay marxaladan mana uusan ku faafin qanjirada galmada dhammaanteed, ama wuxuu ku faafay oo keliya aag aad u yar oo ku yaal burooyinka sanka. In kasta oo qalliinku yahay daaweynta ugu caamsan, daaweynta shucaaca ee heerka kansarka naasaha ayaa badanaa lagula taliyaa qalliinka ka dib si loo yareeyo halista kansarka faafinta ama soo noqoshada.
Kansarka naasaha ee marxaladda II aad ayuu uga weynaadaa kansarka marxaladda naasaha ama / ama ku faafay dhowr qanjirood. In kasta oo qalliinku yahay daaweynta ugu caamsan ee kansarka naasaha heerka II, daaweynta shucaaca ayaa badanaa lagu taliyaa qalliinka ka dib si loo yareeyo halista kansarka faafinta ama soo noqoshada.
Buroogayaasha ku dhaca heerka III ayaa ka weyn 5 cm, ama kansarku wuxuu ku sii fidayaa maqaarka u dhaw ama unugyada muruqyada ama wuxuu ku faafay buro badan oo kudhow. In kasta oo qalliinku yahay daaweynta ugu caamsan ee kansarka naasaha heerka, daaweynta shucaaca ayaa badanaa lagu taliyaa qalliinka kansarka naasaha si loo yareeyo halista kansarka faafinta ama soo noqoshada.
IV-gaan, kansarka naasaha wuxuu ku faafay meel ka baxsan naasaha iyo qanjidhada u dhow qaybaha kale ee jirka. Daaweynta daroogada sida kemotherabi iyo / ama daaweynta hormoonnada waa daaweynta ugu weyn ee lagula taliyo dumarka qaba kansarka naasaha heerka. Marxaladan, daaweynta proton shucaaca ayaa loo isticmaali karaa in lagu gaabiyo burooyinka ama loo xakameeyo xanuunka.
Natiijooyinka Daaweynta Kansarka Naasaha
Daaweynta daaweynta Proton ee kansarka naasaha Xarunta Caafimaadka Kansarka Kansarka ee Protons ee San Diego ayaa laga yaabaa inay bixiso natiijooyin la mid ah tan shucaaca ee raajada, iyadoo la yareynayo dhibaatooyinka mustaqbalka fog iyo halista nolosha sida khatarta wadnaha oo u sabab ah shucaac ku dhaca wadnaha. Waxay sidoo kale bixisaa suurtagalnimada fursadaha hoose ee kansarka sare nolosha dambe sababta oo ah yareynta soo-gaadhista shucaaca ee unugyada caafimaadka qaba iyo xubnahaaga.
Waxaan doonayay inaan ku noolaado nolol dheer mana doonayo inaan qatar ugu noqdo wadne istaag ama wadne dhaawac, sidaa darteed waxaan doortay daaweynta proton. Wada tashikeygii aan la yeeshay Dr. Chang, waxaan kaliya ku ogaa in California Protons ay tahay meesha aan doonayey inaan joogo. Waqti badan ayuu ila qaatay waxaanan dareemay kalsooni aad u badan awoodiisa.
Bukaanka Kansarka Naasaha
Daraasadaha Cilmi-baarista ee Taageera Daaweynta Proton ee Kansarka Naasaha
1 Xaaladda caafimaad ee daaweynta proton beam therapy
Daaweynta proton-ka ma horumarin kartaa saamiga daaweynta ee bukaanka kansarka naasaha ee halista ugu jira cudurka nodal?
Qaab cusub oo loogu talagalay daaweynta shucaaca ee postmastektomi iyadoo la adeegsanayo laambado proton
Daawada shucaaca ee loo yaqaan 'Proton radiotherapy' ee darbiga xabadka iyo shucaaca galmada ee gobolka; Qiyaasta isbarbardhiga iyo gaarsiinta daaweynta
Heerarka Talaalka ee Boqortooyada Ingriiska (START) tijaabooyinka hypofractionation shucaaca daaweynta daaweynta kansarka naasaha: 10-ka sano ee dabagalka natiijooyinka labo tijaabo oo la xakameynayay.
Natiijooyinka isku-qurxinta iyo sunta ku-meel-gaarka ah ee RAPID: tijaabooyin aan kala sooc lahayn oo ah xawaareyn qayb naas ah oo lagu daweynayo saddex geesood oo isku-dabool ah oo ku habboon shucaaca ilayska shucaaca.
Xakamaynta qeyb naasaha ah oo lagu keenay muraayada proton: natiijooyinka wajiga II tijaabin
Shucaaca shucaaca ee umusha ka dib kansarka naasaha ee deegaanka iyo locoregional: suuragalnimada horumar caafimaad ahaan laxiriira
Daaweynta loo yaqaan 'Proton therapy' ee kansarka naasaha ka dib mastektomi: natiijooyinka baaritaanka mustaqbalka ee caafimaad
Khatarta cudurka wadnaha ee ischemic ka dib radiotherapy-ga kansarka naasaha
Kansarrada adag ee heerka labaad ah ka dib daaweynta shucaaca: dib u eegis habeysan oo lagu sameeyo daraasadaha epidemiologic ee xiriirka jawaab-celinta shucaaca